खोटाङमा कानून विषयको पढाइ सुरु « Emakalu Online
खोटाङमा कानून विषयको पढाइ सुरु
खोटाङ । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलस्थित पञ्च माध्यमिक विद्यालयमा कानून विषयको पढाइ सुरु भएको छ। जिल्लामै पहिलोपल्ट यसै शैक्षिक सत्रबाट कानून विषयमा कक्षा–११ को पढाइ शुरु गरिएको हो। ९२ वटा मावि रहेको खोटाङ जिल्लामा कानून विषयको पढाइ सञ्चालन गर्नेमा पञ्च मावि दिक्तेल पहिलो हो। कक्षा ११ को कानुनको विषय अध्ययन गर्न ३३ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन्।
सामान्य शिक्षाले बेरोजगार जनशक्ति मात्र उत्पादन गरिरहेको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै प्राविधिक तथा कानून विषयको शिक्षामा जोड दिइएको प्रधानाध्यापक भवकृष्ण ढकालले बताए। “परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै स्वरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक तथा कानून विषयको पढाइ शुरु गरिएको हो” प्रअ ढकालले भने। विस २०२४ सालमा स्थापना भएको उक्त विद्यालयमा विस २०७० सालदेखि वाली विज्ञान विषयको पढाइ पनि संञ्चालनमा रहेको छ।
विस २०७१ सालदेखि जिल्लामै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल पञ्च माविमा आगामी वर्षदेखि शिक्षा संकायतर्फ विज्ञान र समाज शास्त्रको पढाइ सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ। दिक्तेलस्थित आचार्य गाउँमा रहेको पञ्च मावि सामुदायिक विद्यालयतर्फ लगातार दुई वर्ष जिल्ला उत्कृष्ट भएको थियो। प्रदेश १ सरकारबाट पुरस्कृत सो विद्यालयले गत वर्ष रु पाँच लाख र यस वर्ष रु दुई लाख नगद प्राप्त गरेको थियो। शैक्षिक सुधारको अभियानमा लागेको पञ्च माविलाई यसै वर्ष नगरपालिकाले समेत रु ५० हजार राशिको नगद पुरस्कार प्रदान गरेको थियो।
खाँदबारी-४ मा बौलाहा कुकुरको आँतक, पशुचौपया र मानिसहरु जोखिममा
संखुवासभाको जनसंख्या वार्षिक बृद्धीदर ०.०२ प्रतिशत
संखुवासभामा भीरबाट लडेर गोठालाको मृत्यु
सिलिचोङ गाउँपालिकाको गरिव परिवार पहिचान सम्बन्धी सुचना
चिचिला ३ को वडा भवन उद्घाटन
संखुवासभाको कुन–कुन पालिकामा कति जनसंख्या ?
सङ्खुवासभाको मकालुमा नक्कली नोट फेला पर्‍यो
तपा‍ईंको जिल्ला र गाउँ-नगरको जनसंख्या कति ? (विवरणसहित)
नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख, वृद्धिदर घट्यो
प्रचण्डपत्नी सीता दाहाल अस्पतालबाट डिस्चार्ज
सीटीईभीटीका सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित